မေလ ၁၈ ရက်တွင်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ခေါ်ဆိုမှုအခမ်းအနား၏တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်နှင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်တိုက်ရိုက်အစီအစဉ်။ NAB သတင်းများ | 18 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » တိုက်ရိုက် Programs Feeds နဲ့မေ 18 ON ASPEN မြေကြီး'S ခေါ်ဆိုပွဲထည့်သွင်းနိုင်တဲ့ webcasts
ကော်လိုရာဒို၊ အက်စပန်ရှိဘင်နီဒစ်ဂီတတဲ၌ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောအစီအစဉ်တွင်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဂီတပညာရှင်များနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြမည်။ ဂရမ်မီဆုရအနုပညာရှင်များ Patti LaBelle (“ သင်သာသိလျှင်၊ ” New Attitude”)၊ Colbie Caillat (“ နေထက်ပိုမိုတောက်ပသည်”၊ “ Realize”)၊ Ladysmith Black Mambazo (တောင်အာဖရိကအထီးကျန်သံစုံတီးဝိုင်း)၊ Mickey Hart (ဒေသန္တရပညာရှင်) ဂီတပညာရှင်၊ Grateful Dead ဒရမ်သမားနှင့်အန်တိုနီဟမ်မီလ်တန် (“ လွတ်လပ်မှု”၊ “ ငါဘယ်မှလာသည်”)၊ ကမ္ဘာမြေဆိုင်းဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်း (ဂရမ်မီအနိုင်ရစပယ်ယာ Cheche Alara ဦး ဆောင်သော) နှင့်အခြားသူများကဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုထောကျပံ့။ အစီအစဉ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောစေတမန်များ၏လှုံ့ဆော်မှုပေးသောဟောပြောချက်များနှင့် Batwin + Robin မှစွဲမြဲနေသောအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ဤသန့်ရှင်းပြီးမပြတ်မတည့်သောအစားအစာ (ကြော်ငြာများ၊ အသံဖြင့်ပြောဆိုခြင်း (သို့) အမှားမရှိခြင်း) သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများအားအဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကိုတီထွင်ရာတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာလျှင်အခမဲ့ပေးလိမ့်မည် (ကျေးဇူးတင်ပါ။ Courtesy: Earth's Call) ) ။ အခမ်းအနားမတိုင်မီစွမ်းဆောင်ရည်အချိန်များအပါအ ၀ င်အပြည့်အစုံပြသနိုင်မည်။
ဒီဖျော်ဖြေပွဲက Aspen မှာသုံးရက်ကြာမြင်ကွင်းနဲ့အသံအတွေ့အကြုံကိုကျောက်ချရပ်နားမှာဖြစ်ပြီး၊ ရာသီဥတုအကျပ်အတည်းကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်ဆန်းသစ်တဲ့အဖြေတွေကိုရှာဖွေပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေတဲ့အကျိုးအမြတ်မယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Earth's Call ကိုစတင်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။ ဖိတ်ကြားခံထားရသည့်တနင်္ဂနွေနေ့သည်ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဂီတပညာရှင်များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များကို“ Earth's Call ကိုဖြေဆိုရန်” နှင့်ကမ္ဘာ့ချွေတာသည့်အတွေးအခေါ်များကိုအာရုံစိုက်ရန်ခေါ်ယူလိမ့်မည်။ Earth's Call သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြံဥာဏ်များကိုထူးခြားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်မိတ်ဖက်များမှတဆင့်အသည်းအသန်ထောက်ပံ့ပေးပြီး၎င်းသည်ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကျော်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အဖြစ်အပျက်များအကြောင်းထပ်မံသိရှိလိုသည်များကိုရရှိနိုင်ပါသည် www.supportearthscall.org.
North American အချိန်နှင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
Fiber IN VIA HD:
စမ်းသပ်ခြင်းအစာ: သောကြာနေ့, မေလ 17, 2019; ည 3:00 pm မှ 4:00 pm တွင် MT; ညနေ ၅း၀၀ နာရီမှည ၆း၀၀ အထိ EDT၊ ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှညနေ ၁၀း၀၀ နာရီအထိ
အစီအစဉ်အစီအစဉ် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၈ ရက်၊ ညနေ ၅း၀၀ နာရီမှည ၉း၄၅ မိနစ် (ပြသမှုအလွန်များသောကြောင့်ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်ထက်နောက်မကျ)၊ ည ၇း၀၀ နာရီမှည ၁၁း၄၅ အထိ EDT (မေလ ၁၉ ရက်ည ၁၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်မတိုင်မှီ live show ပြသခြင်းကြောင့်); မေလ ၁၉ ရက်ည ၁၁း၀၀ နာရီမှညနေ ၃း၄၅ (တိုက်ရိုက်ပြသမှုကြောင့်မနက် ၄း၁၅ ထက်နောက်မကျ)
The New York မှာ Switch HD: နယူးယော့ POOL21080i / 59.94
အဆိုပါ Los Angeles မြို့ IN Switch HD: LA က POOL 1 1080i / 59.94
BT မြျှောစငျ - ဒေသခံအဆုံး: HD/ RR1 - HD-SDI, 1080i50
VIA SATELLITE IN HD 1080i / 59.94:
ကို C Band: SES 2, Txp 04C အထိုင်: D; Orbital ရာထူး 87 '' အနောက်; Downlink ကြိမ်နှုန်း 3793.5 ဒေါင်လိုက်,
bandwidth 9MHz, MPEG 4, FEC 3/4, SYMBOL RATE 7.2, DVB S2, 8PSK
KU Band: SES 3, Txp 06K Slot A, Orbital Position 103 'West, Downlink Frequency 11816.75 ဒေါင်လိုက်,
VIA SATELLITE IN HD 1080i / 50:
ဥရောပ - E10A Txp B03 Channel EF, Orbital Slot ၁၀ 'အရှေ့၊ Downlink Frequency 10 အလျားလိုက်၊ Bandwidth 11060.2MHz, MPEG 9, FEC 4/3, SYMBOL RATE 4, DVB S7.2, 2PSK
လက်တင်အမေရိက: IS21 Txp 19C, Slot A, Orbital Slot 302 'အရှေ့၊ Downlink Frequency 4066.4 ဒေါင်လိုက်၊ Bandwidth 9MHz, MPEG 4, FEC 3/4, SYMBOL RATE 7.2, DVB S2, 8PSK
အာရှ - AS5 Txp C7H Channel 9B၊ Orbital Slot ၁၀၀.၅ 'အရှေ့၊ Downlink Frequency ၃၈၆၆.၅ အလျားလိုက်၊ Bandwidth 100.5MHz, MPEG 3866.5, FEC 9/4, SYMBOL RATE 3, DVB S4, 7.2PSK
အာဖရိက / အရှေ့အလယ်ပိုင်း - IS 20 LM03C ကဒ်အထိုင် B၊ Orbital Slot 68.5 'အရှေ့၊ Downlink Frequency 3781 အလျားလိုက်၊ Bandwidth 9MHz MPEG 4, FEC 3/4၊ SYMBOL RATE 7.2, DVB S2, 8PSK
နည်းပညာဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရန်: Lenny Laxer - 917-299-0205
ထည့်သွင်းနိုင်တဲ့, တိုက်ရိုက် webcasts လွှမ်းခြုံ:
အားလုံးဂီတဖျော်ဖြေပွဲ, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် immersive အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု featuring ယင်းထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုအစာကျွေးခြင်း၏တစ်ဦးကတိုက်ရိုက်လွှ webcasts, ကနေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် 7: 00 မှ 11 ညနေ: (နောက်မ 45 ထက်: ကြောင့်တိုက်ရိုက်ပြသရေလွှမ်းမိုးဖို့မေလ 12 အပေါ် 15 နံနက်) 19 ညနေ EDT; at supportearthscall.org.
ကမ္ဘာမြေရဲ့ခေါ်ရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ, စင်ကြယ်သောမပြတ်မတောက် feed ကို (အဘယ်သူမျှမကြော်ငြာ, နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့သို့မဟုတ် bug ကို) embed လုပ်ဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ, ဘလော့ဂါများများ webmaster များနှင့်မီဒီယာစီးဆင်းမှုန်ဆောင်မှုများဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။
အဆိုပါ embed code ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်:
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”www.youtube.com/embed/lgCIsGIkFjcaccelerometer "frameborder =" 0″ ခွင့်ပြုရန် = "; autoplay; စာဝှက်ထားတဲ့မီဒီယာ၊ gyroscope; ပုံ -In- ရုပ်ပုံ "allowfullscreen>> ။
အဆိုပါ webcasts လည်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာမြေရဲ့ခေါ်ဆိုမှုရဲ့စာမျက်နှာကနေတဆင့် Facebook မှာတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကနေတဆင့်မျှဝေဘို့မရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်: www.facebook.com/AnswerEarthsCall/.
အားလုံးအွန်လိုင်းခွဲဝေမှုအဘို့, Courtesy ဂုဏျတငျကျေးဇူးပြုပြီး: ကမ္ဘာမြေရဲ့ခေါ်ရန်။
ဂြိုဟ်တု/ Fiber နည်းပညာဆက်သွယ်ပါ Feed:
splashpr အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
နောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများနှင့်အသက်ရှင်နေသည့်ကာလများနှစ်အလိုက်မျက်နှာဖုံးကိုနှစ်အလိုက်လေးထောင့်တစ်ကွက် - ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2020
၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်စုံဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီ Atomic FOCUS ဖျော်ဖြေရေးသည်စီးပွားရေးအတွက်တံခါးများကိုဖွင့်ပေးသည် - မတ်လ 4, 2020
နောက်ကွယ်မှမြင်ကွင်းများနှင့်သက်ရှိများသည်နှစ်သစ်ကူးညနေခင်းကိုထုတ်လွှင့်သည်၊ လူမှုရေးနှင့်အွန်လိုင်းလွှမ်းခြုံမှု။ - ဒီဇင်ဘာလတွင် 17, 2019
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMeida ပတ်ဝန်းကျင် ဖိုက်ဘာအစာကျွေးခြင်း အခမဲ့အကြောင်းအရာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ဂြိုဟ်တု feed ကို ရုပ်မြင်သံကြား ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် webcasts 2019-04-30
ယခင်: တွဲဘက် Pre-အရောင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်